Masar oo u jawaabtay Itoobiya waxayna xaqiijisay diyaar-garowgeeda joogtada ah ee wadahadalka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar oo u jawaabtay Itoobiya waxayna xaqiijisay diyaar-garowgeeda joogtada ah ee wadahadalka
Masar oo u jawaabtay Itoobiya waxayna xaqiijisay diyaar-garowgeeda joogtada ah ee wadahadalka
Isniintii, Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Masar waxay ka hadashay hadalkii Wasiirka Arimaha Dibada ee Itoobiya Guido Andaragasho ee ku saabsan ujeedada Masar ee ah inay u gudubto Golaha Amaanka si ay uga baxdo wadahadalada biyo xidheenka Renaissance.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Masar, Sameh Shoukry, ayaa cadeeyay u diyaar garowga joogtada ah ee dalkiisa si uu ugala xaajoodo heshiis buuxinaya danaha dadka oo dhan, kuna dhiiri galiyey Ethiopia inay si deg deg ah dib ugula bilaabato wadahadalada hadii ay ku dhawaaqaan inay ka go’antahay balanqaad caalami ah in aysan si buuxda u buuxin biyo xireenka weyn.
Shoukry wuxuu sheegay in Masar ay ku lug lahayd wadahadalada si ixtiraam leh muddo tobanaan sano ah, “wuxuu sharraxayaa u diyaarsanaanta joogtada ah ee wadaxaajoodka si loo gaaro heshiis buuxinaya danaha dadka oo dhan.”
Shukri wuxuu faray “caqabada ku wajahan Ethiopia inay si dhakhso ah dib ugula bilowdo wadahadalada hadii ay cadeyso inay u hogaansami doonto waajibaadka caalamiga ah ee ah in aan loo saarin”, sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee Wasaaradda Arimaha Dibada Masar.
Wadahadalka Renaissance Dam ayaa mar kale istaagay Arbacadii la soo dhaafay, laakiin markan kaliya waa labo todobaad kahor inta la filaayo in la buuxiyo afarta bilyan ee dooxada weyn ee biyo xireenka ah ee laga dhisi doono meel u dhaw xadka Ethiopia iyo Sudan.
Biyo-xidheenkan ayaa udub dhexaad u ah doonitaanka Itoobiya ee ah dhoofinta tamarta ugu weyn ee Afrika.
Qaahira ayaa jimcihii hore ku dhawaaqday inay casuumad u siisay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo farageliyaan si ay dib u bilaabaan wadahadallada.
Sabtidii la soo dhaafay, madaxweynaha Masar Abdel Fattah El-Sisi wuxuu faallo ka bixiyay wadahadalladii burburay ee biyo-xireenka Itoobiya, isagoo sheegay in waddankiisu ka go’an tahay diblomaasiyadda inuu xalliyo qalalaasaha uu Itoobiya kala leeyahay dhismaha biyo-xidheenka.
Al-Sisi wuxuu yiri: “Markii aan u dhaqaaqnay Golaha Amniga … waxay ahayd (sababta) waxaan daneyneynay inaan qaadno wadada diblomaasiyadeed iyo tan siyaasadeed illaa dhamaadka.”
Previous articleRa’iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee Ciidamada Itoobiya
Next articleEgypt responds to Ethiopia and confirms its permanent readiness to negotiate
Dalka Brazil ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo xaaladood markii...
Soomaaliya, Masar iyo Kenya oo shir saddax geesood ah ku yeeshay...